Pathipat Durongpongkasem - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဘာသာစကား: English & Thai
ဆေးရုံ: Samitivej Sukhumvit Hospital
The Second Class Honors M.D., Faculty of Medicine. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University , 2009
Bachelor of Business Administration (General Management). Ramkhamhaeng University. , 2009
Diploma of Thai Board of Internal Medicine. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University , 2015
Diploma of Thai Subspecialty Board of Gastroenterology. Faculty of Medicine Prince of Songkla University , 2017
Certificate of Advanced Endoscopy. NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology, Songklanagarind Hospital. , 2018
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၉ အထိဖြစ်သည်။ အစာအိမ်နှင့်အူမက...
လေဖြတ်ခြင်းမဖြစ်ပွားခင် လေဖြတ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များကိုရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်
လေဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများ သင့်မှာရှိနေသလား? သွေ...
လိင်တူချစ်သူများနှင့် အသည်းရောင် ရောဂါ
အသည်းရောင်ရောဂါ Hepatitis ဆိုတာ အသည်းရောင်ရမ်းလာတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး Hepatitis ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတွေကတော့ A, B, C, D, E စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ကွဲပြား ပါတယ်။ Load more
အသည်းရောင်အသားဝါ A နဲ့ B ကာကွယ်ဆေးဖြင့် တားဆီးမည်
အသည်းရောင်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အသည်းကို ရောင်ရမ်းလာစေပါတယ်။ A, B, C, D, E စသည်ဖြင့် သူတို့ ဘယ်လိုးကူးစက်တတ်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိသလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး အုပ်စုခွဲထားပါတယ်။ Load more
အစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ ပုံမမှန်မှုနဲ့ ပွားများလာတာကို ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တာကတစ်ဆင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ပျံ့နှံ့လာတတ်ပါတယ်။ Load more
Pathipat Durongpongkasem, M.D. is not at Samitivej Sukhumvit Hospital today